पुराना राजनीतिकर्मी तथा कथाकार यज्ञप्रसाद आचार्यको निधन भएको छ ।
मुटु र मिर्गाैलामा समस्या उत्पन्न भई ३ हप्तादेखि काठमाडौंको नर्भिक अस्पतालमा सघन उपचाररत ८७ वर्षीय आचार्यको मंगलवार राति निधन भएको हो ।
उनको राति नै दाहसंस्कार गरिएको परिवारले जनाएको छ ।
जहानियाँ राणाशासन विरुद्धको आन्दोलनमा तत्कालीन धनकुटा जिल्लाको तेह्रथुमका लागि उनले सत्याग्रही कमाण्डर बनेर नेतृत्व गरेका थिए ।
राजपरिषद् स्थायी समितिका सदस्य पनि रहेका आचार्यको नेपाली भाषा, पत्रकारिता, अध्यापन, सामाजिक सेवा र साहित्यिक गतिविधिमा पनि योगदान रहेको छ । वामपन्थी पृष्ठभूमिका उनी विक्रम संवत् २०१६ सालदेखि धरान नगरपालिकाको ३ पटक प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए । उनकै अगुवाइमा नेपालमै पहिलो पटक सामुदायिक बिजुली उत्पादनगृह (पावर हाउस) स्थापना भई धरानमा बिजुली वितरण गरिएको थियो ।
कथाकार आचार्यका ३ कथा संग्रह र नेपालको परराष्ट्रनीतिबारे एक पुस्तक तथा आत्मवृत्तान्त ‘जे देखे, जे भोगे’ प्रकाशित छ । धनकुटाको छथरस्थित तेलिया पीपलेमा विक्रम संवत् १९९० सालमा जन्मिएका आचार्य प्रवेशिका र स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने धरानकै पहिलो व्यक्ति भएको जनाइएको छ ।
पाल्पाको तानसेन नगर र काठमाडौंको भित्री सहरी क्षेत्...
ट्रकले ठक्कर दिँदा प्रहरी हबल्दारको मृत्यु
सोमबार एकैसाथ ३९६ स्थानीय तहमा अस्पताल भवन शिलान्य...
मोटरसाइकल दुर्घटनामा नेकपा नेता तामाङको मृत्यु
चाणक्य भन्छन् - मूर्ख व्यक्तिको प्रशंसा गर्नुपर्छ, किन ?
सावधान ! जुनसुकै समयमा हुन सक्छ हृदयघात, बच्न यसो गर्नुस्
क्षतिमात्र होइन, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा कोरोनाको पाठ...